Apple waxay soo jiidan kartaa Foxconn iyo Magna si ay u soo saaraan Apple Apple | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxaa laga yaabaa inay ku daashay wadahadal ay la gasho gawaarida maanta si ay u dhisaan Apple Car, oo dhis iyada oo aan lagaa caawin midkoodna. Waxaa laga yaabaa inay ku dhammaato sameynta shirkadda Foxconn, oo ay ula socoto sida soo jiidashada oo ay sannado badan u soo uruurineysay aaladaha Apple, tan kalena waxay noqonaysaa Magna, oo ah soo saaraha baabuurta ee ugu weyn adduunka.
Apple waxaa loo isticmaalaa in lagula xaajoodo soo-saareyaasha booska xukunka. "Waxaan rabaa inaad tan iga dhigto, qiimahan, haddii kale, waxaan ka dalbanayaa qof kale," waa hal ku dhiggiisa. Markii uu bilaabay inuu xiriir la sameeyo shirkadaha waaweyn ee soo saara gawaarida si uu u soo saaro riyadiisa Apple Car, wuxuu arkay in booskiisu uusan ahayn kan ugu weyn, taasna ma uusan jeclayn haba yaraatee.
Bloomberg unbaa daabacday a warbixinta halkaas oo uu ku sharaxayo in Apple ay la xiriirtay dhowr gawaarida dhaqameedka bilihii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan Hyundai y Nissan. Si kastaba ha noqotee, wadahadaladani waxay cadeeyeen inaan lagu guuleysan, maadaama soo saarayaasha gawaarida ay aad uga cagajiidayaan inay dhisaan gaari 'amar'.
Halka Apple ay dhaqan ahaan kala shaqeysay soosaarayaal kala duwan aaladaha wax soo saarkooda sida iPhones, Ipads iyo Macs oo lagu iibinayo astaanta gaarka ah ee Apple. Si kastaba ha noqotee, kuwa sameeya gawaarida ayaa cadeeyay inay ka yar yihiin rabitaankooda inay galaan dagaalkaas, oo ay noqdaan waxa u dhigma inay yihiin soo saare ay kireysatay shirkad seddexaad si ay u sameyso "damac" shirkad sida Apple.
Bishii hore waxaan horey uga faallooday noticia ee maxaa Foxconn Wuxuu sameyn doonaa gawaarida korontada u sameysa Henrik Fisker, intii uu howsha wadayna wuxuu ku fakarayay inuu sidoo kale noqon karo musharax sameeya Apple Car. Foxconn iyo Apple waxay wada shaqeynayeen sanado badan waxayna si fiican isu fahmeen. .
Magna waxay sameyn laheyd waqti dheer kahor Foxconn
Magna waxay leedahay geedo badan oo gawaarida lagu ururiyo adduunka oo dhan.
Musharaxa kale wuxuu ahaan lahaa soo saaraha gawaarida Magna. Apple waxay markii ugu horaysay wadahadalo la gashay si ay mashruucooda Apple Car ay uga dhigto mid dhab ka ah Magna shan sano ka hor, markii dadka Cupertino ay horeba uga shakiyeen inay naqshadayn karaan gaadhigooda korontada ku shaqeeya. Bloomberg waxay sharraxeysaa in Magna ay leedahay khibrad badan oo ay ku dhisto gawaarida caadada ah, isku soo uruurinta gawaarida raaxada ee shirkadaha sida BMW, Daimler AG, iyo Jaguar Land Rover.
Wax walba waxay kuxiranyihiin xawaaraha Apple kujirto. Ikhtiyaarka Magna ayaa ah midka ugu macquulsan uguna dhaqsaha badan ee lagu ordo. Waxay khibrad badan u leedahay soo saarista gawaarida, waxayna aad ugu isticmaashay soo saarida moodooyin qaali ah oo noocyo kala geddisan leh, iyadoo la kulmeysa dalabaadka macaamiisheeda.
Iyadoo Foxconn ay Apple leedahay "dareen" ka weyn, laakiin waa qaraha in la furo. Isagu weligii baabuur urursado. Waxay horey u leedahay warshad isku-uruurinta mootooyinka korantada, «Guji«, Haddana wuxuu dhisayaa warshad cusub oo lagu soo ururinayo qaabka cusub ee uu dalbaday Fisker. Haddii aad doorato Foxconn, hubaal waxay qaadan doontaa waqti dheer si aad u aragto gaariga Apple-ka ee waddada, mana ahan wax fudud oo shaashadaha laga siinayo hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay soo jiidan kartaa Foxconn iyo Magna si ay u sameyso gaarigeeda Apple